Home / Time Management is Life Management
“Time is the great equalizer” လို့ ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှင်သန် နေထိုင်မှုမှာ တူညီတာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နေ့စဉ် အချိန်အတိုင်းအတာပမာဏပါ။ လူတိုင်းက တစ်နေ့မှာ ၂၄နာရီ၊ တစ်ပတ်မှာ ၇ရက်၊ တစ်လမှာ ရက် ၃၀ စသည်ဖြင့် တူညီတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခု ရှိနေကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဘဝမှာ တကယ်တမ်း အရေးကြီးတာက ကျွန်တော်တို့မှာ အချိန် ဘယ်လောက် ရှိနေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အသုံးချနေသလဲဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “Time Management” ပုံစံပါ။
အချိန်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာ ငွေနဲ့ ဝယ်ယူလို့မရသလို အစားလည်း မထိုးနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တစ်နေ့တာ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာ ဘဝကို Potential အမြင့်ဆုံး ဖြစ်လာအောင်၊ Value တစ်ခုရှိတဲ့ Lifestyle တစ်ခုဖြစ်လာအောင်၊ ကိုယ်တိုင်က Life is Worth Living ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရလာအောင် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အချိန်တွေကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲပြီး အသုံးချမှာလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးဆုံး တာဝန်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ရဲ့ အချိန်ကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး အသုံးချနိုင်ပြီဆိုရင် ဘဝရဲ့ “Overall Quality” က မြင့်သည်ထက် မြင့်မားလာစေနိုင်လို့ပါ။
တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝကို စီမံခန့်ခွဲတာမျိုးပါပဲ။
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲ ကြမှာလဲ?
လတ်တလော ကိုယ့်အချိန်တွေကို ဘယ်လို အသုံးချနေတယ်ဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ပါ။
အလွယ်ဆုံး ဥပမာ ပေးရရင် ကိုယ်က ရုံးကို ကားမောင်းသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီလို နေ့စဉ် သွားနေကျ အသွားအပြန် လမ်းတလျှောက်မှာ ကားပိတ်တဲ့အခါ မီးပွိုင့်မိနေတဲ့အခါ ကိုယ်က ဘာလုပ်နေတတ်လဲ? ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကိုပဲ ဖတ်နေတတ်တာလား? သီချင်းအသစ်တွေ နားထောင်နေတတ်တာလား? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ Lecture တွေကို Record လုပ်ထားတဲ့ Recording ကို ပြန်နားထောင်နေတာလား? ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို လေ့လာဖို့ Audiobook ကိုပဲ နားထောင်နေတာလား? ဒီလို နည်းမျိုးတွေနဲ့ လက်ရှိ ကိုယ့်အချိန်တွေကို Manage လုပ်နေတဲ့ ပုံစံကို သေချာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလို ဘာရယ်မဟုတ် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်လေးတွေက တချိန်ချိန်မှာ “ငါ ဒါလုပ်ခဲ့ဖို့ အချိန်ရှိခဲ့ရင်ကောင်းမှာ” ဆိုတဲ့ နောင်တတစ်ခု ရလာနိုင်စေတဲ့ အလဟဿ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားတတ်လို့ပါပဲ။
အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေကို ဦးစားပေးတတ်ပါစေ။
Time Management လုပ်မယ်ဆို သိထားရမှာက ကိုယ့်အတွက် အရေးမကြီးတဲ့ အရာတွေအတွက် အချိန်ကုန်မခံသင့်တာပါ။ ဒီလိုမျိုးတွေအတွက် ကိုယ့်မှာ Priority စီထားတဲ့ “To Do List” လို Task Plan တစ်ခုခု ရှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ် လုပ်မယ့် အလုပ်တစ်ခုက အချိန်တွေကြာမယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် ဘာမှ သိပ်အရေးကြီးတာမျိုးမဟုတ်ရင် To Do List ရဲ့အောက်ဆုံးမှာသာ ထားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက တခါတလေ အရေးအကြီးဆုံးကို နောက်ဆုံးမှ သေချာ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်အတွက် အသေးအဖွဲလေးတွေက စလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့လို Task သေးသေးလေးတွေကြောင့် Time Consuming တွေ ဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်း အရေးအကြီးဆုံး Task တွေအတွက် အချိန် မလောက်တော့တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာမို့ အချိန်ပမာဏကို ထည့်တွက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေကို ဦးစားပေးတတ်ပါစေ။
ကိုယ်တိုင် Time Management လုပ်တဲ့အခါ အခက်ခဲဆုံးအရာတစ်ခုက Punctual ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့် Schedule ရဲ့ ပထမဆုံး Task မှာတင် နည်းနည်း နောက်ကျသွားခဲ့သည် ဆိုပါစို့။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ Schedule တွေအားလုံးလိုလို အနည်းငယ်စီ နောက်ကျကုန်တော့မှာ။ ဘယ် Task ကို မဆို Plan ကျကျနဲ့ အချိန် အတိအကျသာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Deadlines မတိုင်ခင် ပြီးစီးသွားနိုင်မှာက အသေအချာပါပဲ။
အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ လိုတာထက် ပိုအချိန်ကုန်တယ်ဆိုတာရဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုက ကိုယ်တိုင် သေချာ အာရုံမစိုက်နိုင်လို့ပါ။ ကိုယ်က Task တစ်ခုကို တစ်နာရီအတွင်းပြီးအောင် လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ တစ်နာရီအတွင်း ဒီအလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက် လုပ်တတ်ပါစေ။
ပြဿနာက ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလိုလိုက “Procrastination” ဆိုတာကြီးကို သိပ်သဘောကျတာပါ။ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတွေကို လျစ်လျူရှုပြီးတော့ကို အကြောင်းမဲ့ အချိန်ဆွဲပြီးနေတတ်ကြပါတယ်။
တချို့ကိစ္စတွေက သေချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကာမှ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုပေမယ့် Procrastination က Perfection ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ဒီနေ့ ကိုယ် အချိန်ဆွဲလိုက်တဲ့ Task တစ်ခုက မနက်ဖြန်အတွက် Burden တစ်ခုလို့တောင် ပြောလို့ရနေပါပြီ။ ကိုယ့် Lifestyle မှာ Time Management သေချာ စနစ်တကျ လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ဒီအကျင့်ဆိုးကို စွန့်ပစ်သင့်ပါပြီ။
လိုအပ်ရင် Break ယူပါ။
Daily Tasks တွေကို ရပ်ပစ်ပြီး Break ယူတာက Time Management လုပ်တဲ့အထဲမှာ ပါလို့လားလို့ မေးလာရင်တော့ Yes လို့ပဲ ဖြေပါရစေ။ Time Management ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် Life Management လို့ ဆိုနိုင်တာမို့ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ပန်းနေတဲ့ စိတ်အာရုံတွေကို အလုပ်မှ အလုပ်ဖြစ်နေရတဲ့ နေ့ရက်တွေထဲက ရုန်းထွက်ပြီး ခဏတာ စိတ်ကို အနားပေးတာမျိုးလိုက်တာမျိုးက နောက်လှမ်းရမယ့် ခြေလှမ်းတွေထက် ပိုအားဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီတော့ “Time is Free but it’s Priceless! You can’t Own it but you can Use it” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။
အချိန်ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပြန်မရနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
ဒါကြောင့် စက္ကန့်တိုင်းကို တန်ဖိုးထားရင်း ဘဝကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြတ်သန်းပါ။
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေကို နေ့စဉ် ဘဝတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲ အသုံးချပြီး အကောင်းဆုံး
ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ တစ်ခုဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးလိုက်ပါ။